CANCER RESEARCH BOAT RACES 2017 အကြောင်းကိုသိထားသင့်သည့်အချက်များ - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တွင်သိမ်းမြစ်မြစ်သည် ၁၆၃ ကြိမ်မြောက်ကင်ဆာသုတေသနလှေစီးပွဲကိုကျင်းပမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုလိုပဲ၊ သင်ဟာနံနက် ၅ နာရီ၊ မနက် ၅ နာရီ၊ ကဏန်းဖမ်းထားတဲ့ boatie မဖြစ်ခဲ့ရင် Tab ကသင့်ကိုသင်ပုန်းအောင်းနေစေရန်အသိပညာ ၁၀ ခုကိုစုဆောင်းထားသည်။
အမျိုးသားများ၏ပြိုင်ပွဲ 5.35pm မှာဒီတနင်္ဂနွေသည်နှင့်အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲ 4.35pm မှာတစ်နာရီအစောပိုင်းကစတင်ခဲ့သည်။ Lightweights သည်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပရိတ်သတ်များနှင့်ကင်းဘရစ်သည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်ကိန်းဘရစ်ချ်ကျောင်းသားအများစုထင်ထားသည့်အတိုင်းသင်သည်လန်ဒန်တွင်နေထိုင်သည်ဆိုပါက Putney Bridge နှင့် Chiswick Bridge မှနောက်ဆုံးအချိန်များကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရမည်။ ဆရာတော်၏ပန်းခြံနှင့် Furnivall ဥယျာဉ်များတွင်လည်းကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များနှင့်ကောင်းမွန်သောလေထုရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်ရန်ကံမကောင်းပါက၊ Clare Balding (မှန်ကန်သောစတော့ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊ ယခင်ကန်တာဘ၊ နယူးဟမ်နှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ) မှညနေ ၄ နာရီမှစ၍ ဘီဘီစီအပေါ်တရားစွဲဆိုမှုအားဖြင့်သင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
၁၈၂၉ ခုနှစ်တွင် Oxbridge ကျောင်းမှသူငယ်ချင်းများနှင့် Henley တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြေးပြိုင်ပွဲတွင် Oxford သည် J.P. Heywood-Lonsdale (သူ၏ဒေသဆိုင်ရာပြည်နယ်ကျောင်းသို့သွားခဲ့သူဖြစ်သူ) နှင့်အတူအနိုင်ရခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ 2017 အားလုံးနောက်ခံနှင့်လိင်ကနေ rowers လိုက်လျောညီထွေ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သောက်စရာဂိမ်း Pimms တစ်အိုးနှင့်အတူကြံစည်အကြံပြုပါသည်။ သင်စတင်ရန် - Land Economy (သို့မဟုတ်) အမေရိကန်ဝဲစကားလုံးများကြားသည့်အခါသောက်ပါ။ အကယ်၍ အမေရိကန်သည် Land-Ec ကိုလေ့လာနေသောအမေရိကန်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏သောက်စရာကိုလျှော့ချရန်အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လူကြိုက်များသောအချိန်တွင် (တစ်ချိန်က Wimbledon တွင်တင်းနစ်ကစားသမားများကိုကြည့်ပါ) ဒါကြောင့်သူတို့ punditry အတွက်သူတို့ကိုမေးပါစေ။
သင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သူဖြစ်ပါကအရေးကြီးသောလမ်းညွှန်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ပထမ ဦး စွာ, fuck ဆိုတဲ့ tweed ဝတ်ဆင်ကြဘူး Oxf * ကြိမ်မြောက်ဖို့ထားခဲ့ပါ။ သို့သော် (သူသည်မိမိအခန်းကိုမစွန့်သေးသောလတ်ဆတ်သောသင်္ချာအတွက်) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် - အပြာရောင်အမှိုက်များစွာကိုဝတ်ဆင်ပါ (သို့) အကယ်၍ လှေတစ်စင်းထို့နောက်တောက်ပသောကလပ်မီးရောင်များကိုသဘာဝကျကျမျှော်လင့်ထားပါ။
အစဉ်အလာအားဖြင့်လူမျိုးမရွေးညညတွင်အဖွဲ့များသည်ဝတ်လစ်စလစ်ဓါတ်ပုံများဖလှယ်ကြသည်။ လှော်ခတ်သမားများသည်အမြဲလှေသမားများနှင့်အိပ်လေ့ရှိကြောင်းသင်သိကောင်းသိနိုင်သော်လည်း Crushbridge သည်အခြေခံအားဖြင့် boatie orgy ဖြစ်သည့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ သင်၏ Cantabridgian romp တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်အလင်းရောင်များအပေါ်သင်၏သစ္စာရှိမှုကိုပြသရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
Thames ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်များသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းက flotilla တွင်အသုံးပြုသောသစ်သားလှေများသည်မလုံခြုံဘဲလှေလှော်များအတွက်ရေအခြေအနေများကိုစိတ်မဆိုးစေသည့်အတွက်ကြေငြာခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကလူမျိုးတွေဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့မထိတွေ့ခဲ့ကြဘူး။ ထိန်းချုပ်မှုပြန်ယူပြီးဘို့အများကြီး။
တစ် ဦး ရှုပ်ပွနေဖို့ဖန်စီ?
Oxf * rd ယောက်ျားများသည်လက်ရှိအချိန်တွင် 2/5 တွင်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ကာကင်းဘရစ် ၁၅/၈ တွင်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှအမျိုးသမီးများသည် ၅/၄ အလေးသာမှု ရှိ၍ ထိုင်နေကြသည်။
၆ ပေအလေးချိန်ရှိတဲ့သူက ၉၀ ကီလိုအလေးချိန်ရှိသလား။ သငျသညျကော့ 50kg အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသေချာ? ကောင်းပြီ, သူတို့ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အသင်းများသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကစားနည်းများကိုလေ့ကျင့်လေ့ရှိပြီး၊ တစ်နှစ်လျှင်ထိုင်ခုံ ၆ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်
boatie lingo (ယခုအီးယူမှယခုအခါအသိအမှတ်ပြုထားသောဘာသာစကား) ကိုအလွယ်တကူဖျက်သိမ်းရန်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Robert Shearme ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးသည်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ကြောင် meme ဗီဒီယိုဂိမ်းမှာအော်ဟစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး